You are here: Home somal Wasiirka Ciyaaraha Oo Xaqiijiyey In Xabsiga Loo Taxaabay Badiba Ciyaartoyga Gobolka Togdheer Iyo Gobolka Sool Oo Ku Laatay Gobolka Togdheer Oo Ka Baaqsaday Ciyaaraha
Wasiirka ciyaarah Somaliland waxa uu sheegay in ciyaartoyga gobolkaas uu soo kala dhex galay khilaaf kaas oo sababay inay kala noqdaan laba dhinac oo iska soo hor jeeda.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cali Siciid Raygal oo goor dhawayd shirjaraid qabtay ayaa sheegay in ciyaartoyga xulka gobolkaas loo taxaabay xabsiga magaalada mandhera, wasiirku waxa uu tilmaamay inay ciyaartoygaasi u kala safteen laba dhinac oo salka ku haya nidaam qabiileed.
Ciyaartoyga gobolka togdheer uga qayb galaya tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa u kala saftay kuwaas oo khilaaf soo jiitamayey u dhaxeeyay mudooyinkii u danbeeyey, kaas oo haatan sababay in ciyaartoyga gobolka togdheer iyaga oo ku sugan magaalada hargiesa uu soo rogaal celiyo khilaaf hore oo u dhaxeeyay.
Wasiirka ciyaaraha Somaliland waxa uu sheegay in xulka Gobalka Sool oo manta la ciyaarayey gobolka Togdheer ay ku lateen gobolkaas isla markaana gobolka Sool uu halkaas ku qaatay saddex dhibcood oo bilaa dhibaato ah.
Arintan ayaa caqabd ku noqon doonta ciyaaraha gobolka togdheer oo inta badan lagu tilmaamo inuu ka mid yahay gobolada ugu ciyaartoyga wanaagsan soamliland.